5G ကွန်ယက်ကို ဒီနှစ်မှာ သုံးနိုင်တော့ မလား ? | Myanmar Mobile App
Home Uncategorized 5G ကွန်ယက်ကို ဒီနှစ်မှာ သုံးနိုင်တော့ မလား ?
5G ကွန်ယက်ကို လာမယ့်နှစ်များအတွင်းမှာ အသုံးပြုနိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းများ ယခင်က ထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုတော့ ဒီထက်စောပြီး သူ့ကို အသုံးပြုနိုင်တော့မယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ Ericsson Mobility ရဲ့ သုတေသန စစ်တမ်းအရ 5G ကွန်ယက်ကို ဒီနှစ်ထဲမှာ တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး လာမယ့်နှစ် မှာ 5G Smartphone များ ပေါ်လာတော့မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ အဲဒီကွန်ယက်ကို အစောဆုံး အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာ အာရှနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာမှ အနောက် ဥရောပနိုင်ငံများက အဲဒီ ကွန်ရက်ကို အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ စစ်တမ်းက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်မှာ 5G ကိုထောက်ပံ့တဲ့ စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်ပေါင်း တစ်ဘီလီယမ်ရှိလာမယ်လို့ စစ်တမ်းက ဖော်ပြထားပါတယ်။ မိုဘိုင်း ကွန်ရက်အားလုံးရဲ့ ငါးပုံပုံတစ်ပုံဟာ 5G ကွန်ယက် ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်မှာတော့ မိုဘိုင်း ကွန်ယက်အားလုံးရဲ့ ထက်ဝက်ဟာ 5G ကွန်ယက်ကို အစားထိုးလာကြမှာပါ။ အရှေ့မြောက် အာရှမှာတော့ သုံးပုံပုံတစ်ပုံနဲ့ အနောက် ဥရောပမှာ ငါးပုံပုံတစ်ပုံဟာ အဲဒီ ကွန်ရက်ကို သုံးလာကြမှာပါ။
လက်ရှိမှာ 5G ဟာ ဈေးကွက်ထဲကို မရောက်ရှိသေးပါဘူး။ ကုမ္ပဏီများက သူတို့ရဲ့ 5G Device များကို ရောင်းချမယ့် အစီအစဉ်များကို ကြေညာနေကြပါတယ်။ ဟွာဝေးကလည်း ရှန်ဇန်မှာ ဧပြီလတွင် ကျင်းပခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ Global Analyst Summit မှာ လာမယ့်နှစ် ဒုတိယနှစ်ဝက်မှာ ပထမဆုံး 5G Phone ကို ရောင်းချမယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်မတိုင်ခင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒုတိယ ကွာတားမှာတော့ ပထမဆုံး 5G Mobile Hotspot ကို ဟွာဝေးက မိတ်ဆက်မှာပါ။
ဟွာဝေးက အခြား ကုမ္ပဏီများမှ စမတ်ဖုန်းများမှာလည်း သူ့ရဲ့ 5G Modems များကို ထည့်သွင်းထားကြမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဟွာဝေးက သူ့ရဲ့ 5G Chip ရဲ့ အမည်နဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကိုတော့ မပြောကြားသေးပါဘူး။ ဟွာဝေးက Mobile World Congress 2018 မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Balong 5G01 Chip ဟာ 5G Chip ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
5G ကှနျယကျကို ဒီနှဈမှာ သုံးနိုငျတော့ မလား ?
5G ကှနျယကျကို လာမယျ့နှဈမြားအတှငျးမှာ အသုံးပွုနိုငျတော့မယျဆိုတဲ့ သတငျးမြား ယခငျက ထှကျပျေါခဲ့ဖူးပါတယျ။ အခုတော့ ဒီထကျစောပွီး သူ့ကို အသုံးပွုနိုငျတော့မယျလို့ ထငျရပါတယျ။ Ericsson Mobility ရဲ့ သုတသေန စဈတမျးအရ 5G ကှနျယကျကို ဒီနှဈထဲမှာ တညျဆောကျနိုငျမှာ ဖွဈပွီး လာမယျ့နှဈ မှာ 5G Smartphone မြား ပျေါလာတော့မယျလို့ ပွောပါတယျ။ အမရေိကနျမှာ အဲဒီကှနျယကျကို အစောဆုံး အသုံးပွုနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီနောကျမှာ အာရှနဲ့ နောကျပိုငျးမှာမှ အနောကျ ဥရောပနိုငျငံမြားက အဲဒီ ကှနျရကျကို အသုံးပွုနိုငျမှာ ဖွဈတယျလို့ စဈတမျးက ဖျောပွထားပါတယျ။ ၂၀၂၃ ခုနှဈမှာ 5G ကိုထောကျပံ့တဲ့ စမတျဖုနျး၊ တကျဘလကျပေါငျး တဈဘီလီယမျရှိလာမယျလို့ စဈတမျးက ဖျောပွထားပါတယျ။ မိုဘိုငျး ကှနျရကျအားလုံးရဲ့ ငါးပုံပုံတဈပုံဟာ 5G ကှနျယကျ ဖွဈလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ အမရေိကနျမှာတော့ မိုဘိုငျး ကှနျယကျအားလုံးရဲ့ ထကျဝကျဟာ 5G ကှနျယကျကို အစားထိုးလာကွမှာပါ။ အရှမွေ့ောကျ အာရှမှာတော့ သုံးပုံပုံတဈပုံနဲ့ အနောကျ ဥရောပမှာ ငါးပုံပုံတဈပုံဟာ အဲဒီ ကှနျရကျကို သုံးလာကွမှာပါ။
လကျရှိမှာ 5G ဟာ ဈေးကှကျထဲကို မရောကျရှိသေးပါဘူး။ ကုမ်ပဏီမြားက သူတို့ရဲ့ 5G Device မြားကို ရောငျးခမြယျ့ အစီအစဉျမြားကို ကွညောနကွေပါတယျ။ ဟှာဝေးကလညျး ရှနျဇနျမှာ ဧပွီလတှငျ ကငျြးပခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ Global Analyst Summit မှာ လာမယျ့နှဈ ဒုတိယနှဈဝကျမှာ ပထမဆုံး 5G Phone ကို ရောငျးခမြယျလို့ ကွညောထားပါတယျ။ အဲဒီ အခြိနျမတိုငျခငျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဒုတိယ ကှာတားမှာတော့ ပထမဆုံး 5G Mobile Hotspot ကို ဟှာဝေးက မိတျဆကျမှာပါ။
ဟှာဝေးက အခွား ကုမ်ပဏီမြားမှ စမတျဖုနျးမြားမှာလညျး သူ့ရဲ့ 5G Modems မြားကို ထညျ့သှငျးထားကွမယျလို့ ပွောပါတယျ။ ဟှာဝေးက သူ့ရဲ့ 5G Chip ရဲ့ အမညျနဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားကိုတော့ မပွောကွားသေးပါဘူး။ ဟှာဝေးက Mobile World Congress 2018 မှာ မိတျဆကျခဲ့တဲ့ Balong 5G01 Chip ဟာ 5G Chip ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
Previous articleတကယ့် Screen မျက်နှာပြင်ပြည့်စမတ်ဖုန်းကို Vivo မိတ်ဆက်ပြီ
Next articleမြစ်ထဲ နှစ်ပတ်ကြာ နစ်မြုပ်နေပေမယ့် အကောင်းအတိုင်း ရှိနေသေးတဲ့ iPhone X (Video)